कांग्रेस महाधिवेशनका लागि दुई वर्ष कुर्नुहुँदैन : नेता डा. रामशरण महत
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तनका कुरा उठिरहँदा सभापति शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेता पनि विजयी भएका छन् । यसले नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठाउनेहरुलाई धक्का लागेको कतिपयको तर्क छ । चुनावमा कांग्रेसले हार बेहोरेपछि केन्द्रिय समिति र महासमिति बैठक हुँदै अर्ली महाधिवेशनमा जनुपर्नेसम्मका आवाज उठेका छन् ।
तर अहिलेसम्म चुनावको समिक्षाका लागि कुनै पनि बैठकसमेत बोलाइएको छैन । यिनै विषयवस्तुको सेरोफेरोमा रहेका ऋषि धमलाले कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महतसँग कुराकानी गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
चुनावी नतिजाले कांग्रेसलाई निकै कमजोर प्रमाणित गरेको छ । अबको कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ?
कांग्रेस अलिकति कमजोर भएको छ । यसका विभिन्न कारणहरु छन् । अब पार्टीको औपचारिक बैठकहरु बसेर समिक्षा गर्छौँ । पार्टी कमजोर भयो भनेर शीथिल भएर बस्दैन । कसरी नयाँ जीवन दिने, कसरी संगठन विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा अगामी दिनमा स्पष्ट खाका बनाएर सुदृढिकरणको अभियानमा लाग्छौँ ।
कांग्रेस हार्नुको कारणहरु केलाई मान्नुभएको छ ?
वामपन्थीहरु एक भए । हाम्रा पनि आन्तरिक कमजोरीहरु छन् । रणनीतिक कमजोरीहरु भएका छन् ।
नेतृत्व परिवर्तनको कुरा भइरहेका बेला संसदीय दलको नेतामा पनि सभापति शेरबहादुर देउवा नै निर्वाचित हुनुभयो । अब कसरी पार्टी सुदृढ हुन्छ ?
सभापति देउवाले समानुपातिकबाट आफ्ना मान्छेलाई सासंद बनाएका कारण दलको नेतामा निर्वाचित हुनुभएको हो । संसदीय दलमा बहुमत थियो, त्यसैले जित्नुभयो । पार्टी भनेको संसदीय दल मात्रै होइन ।
अब देउवाले संसदमा बोलेर जनताको मन जित्न सक्नुहोला त ?
संसदमा प्रतिपक्षी दलको नेता देउवा मात्रै होइन । अरु पनि सक्षम साथीहरु छन् । सशक्त र उचित भूमिका कांग्रेसले खेल्न सक्छ ।
कांग्रेसभित्रको गुटगट रानीतिले कमजोर भएको भनिन्छ । आगामी दिनमा कांग्रेसलाई बलियो बनाउन के गर्नुपर्ला ?
गुटगत राजनीतिबाट माथि उठ्नुपर्छ । मैले प्रकाशमानलगायतका सबै साथीलाई भनेको छु, गुटभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्यो । संगठन बनाउनतिर ध्यान दिनुपर्छ ।
नेतृत्व परिवर्तका लागि भन्दै प्रकाशमानले संसदीय दलको नेतामा चुनाव लड्नुभयो । तर हार्नुभयो नि ?
निर्वाचनमा कांग्रेसले हारेपछि उहाँ सभापति देउवाप्रति असन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो । उहाँले प्रोटेष्टको रुपमा लड्नुभएको हो । तर अब गुटगत राजनीति छोडेर कांग्रेसको नीति र दर्शनका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।
चुनाव हारेपछि महासमितिको बैठक बोलाउन दबाब दिइएको छ । तर देउवाले बैठक बोलाउने संकेत नै गर्नुभएको छैन ?
महासमितिको बैठक बोलाउनुपर्छ । निर्वाचनको समिक्षाको लागि कार्यसमिति बैठक पनि बस्नुपर्छ । यसबारेमा पार्टीभित्र सल्लाह भइसकेको छ । केन्द्रिय समिति बैठकपछि महासमितिको बैठक बस्छ । देशको संरचनाअनुसार पार्टीको संरचना निर्माणका लागि विधान संशोधन पनि गर्नुपर्ने छ ।
अर्ली महाधिवेशनको सम्भावना कति छ ?
अर्ली महाधिवेशनको सम्भावना छ । किनभने पार्टीको अहिलेको संरचना देशको पुरानो संरचनाअनुसार छ । यसलाई नयाँ संरचनामा लैजानका लागि पनि अर्ली महाधिवेशनको खाँचो छ । त्यसैले महाधिवेशनका लागि दुई वर्ष कुर्नुहुँदैन । चाँडै नै गर्नुपर्छ । मलाई लाग्छ, हुन्छ ।
सभापतिबाट देउवालाई हटाउनुपर्छ भन्ने तपाईको तर्क हो ?
यो मैले निर्णय गर्ने कुरा होइन । कार्यकर्ता वा देशभरीका प्रतिनिधीले गर्छन् । जसको आवश्यकता छैन, उनीहरु विदा हुन्छन्, जसको आवश्यकता छ उनीहरु प्रवेश गर्छन् ।
वाम गठबन्धनको सरकाले वैदेशिक लगानी भित्र्याएर देश विकास गर्छु भनेका छन् । अब देश विकासको बाटोमा जानेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
सहयोग त पहिले पनि गरेका छन् । अहिले पनि गर्छन् । तर सहयोगको सही सदुपयोग हुनुपर्छ । चुनावको परिणाम आएपछि मात्रै शेयरबजार अस्तव्यस्त भएको छ । नेप्से परिसुचक २ सय अंकभन्दा बढिले घटेको छ । लगानीको वातावरण झन विग्रिएको अवस्था छ । त्यसैले हावादारी कुरा गरेर मात्रै हुँदैन । प्रशासनको संरचना, कर्मचारी र सुविधा मात्रै बढाइएको छ । विदेशी लगानी कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुनै योजना छैन । खर्च कसरी गर्ने भन्ने नियम बनेको छैन । कुरा होइन, काम गर्नुपर्छ, राजनीति होइन, विकास गर्नुपर्छ ।
देश विकासका लागि के गर्नुपर्ला ?
विकासको लागि संस्कृति चाहिन्छ । उद्यमशिलता, लगानी र विकासका लागि वातावरण बनाउनुपर्छ । आविष्कार र मिहिनेत गर्ने वातावरण चाहिन्छ । अब आन्दोलन र हड्ताल गर्ने होइन, देश विकास गर्ने हो । निर्माणतिर लाग्नुपर्छ । जसले धेरै कुरा गर्छ, त्यसले काम गर्दैन । काम गर्ने मान्छेले भाषण गर्नुहुँदैन ।
जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले कांग्रसलाई पनि सरकारमा आएर देश विकासमा सहकार्य गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यस्ता कुरामा विश्वास छैन । न त अहिले कांग्रेस सरकारमा जान्छ, न त उहाँहरुको चाहना नै छ । कुरा बढि गर्ने भनेको त्यही हो । कसले के भन्यो त्यो छोड्नुस्, कसले के काम गर्छ त्यो हेर्ने हो ।